Shaqaalaha Qaramada Midoobay oo deg deg looga saarayo Itoobiya iyo xaalada oo kasii dartay | Allbanaadir.com
Home NEWS Shaqaalaha Qaramada Midoobay oo deg deg looga saarayo Itoobiya iyo xaalada oo...
Shaqaalaha Qaramada Midoobay oo deg deg looga saarayo Itoobiya iyo xaalada oo kasii dartay
Dagaalka u dhaxeeya ciidamada federaalka Itoobiya iyo xoogaga taabacsan TPLF ayaa sii xoogeestay, waxaana dagaalka uu kusii baahay deegaano hor leh oo ka baxsan Waqooyiga dalka Itoobiya.
Ra’isul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo masuuliyiin kale ayaa gaaray jiidaha hore ee dagaalka si ay u hogaamiyaan dagaalka looga soo horjeedo xoogaga TPLF ee doonaya in ay la wareegaan magaalada Adis Ababa.
Qaramada Midoobay ayaa ku dhawaaqday in ay si deg deg ah dalka Itoobiya ugala baxeyso shaqaalaheeda si uga bad baadaan colaada, waxa ayna Qaramada Midoobay sheegtay in dagaalka ka socda Itoobiya sii xoogeesanyo.
Qaar kamid ah wadamada reer Galbeedka ayaa horey dalka Itoobiya uga saaray muwaadiniintooda, waxaa sidoo kale sii kordhaya dalalka ugu baaqaya in Itoobiya kasoo baxaan muwaadiniintooda.
Dagaalka Itoobiya ka socda ayaa laga cabsi qabaa in uu sii xoogeesto uuna soo gaaro magaalada Adis Ababa, waxa ayna ciidamada Federaalka Itoobiya awoodooda isugu geenayaan difaacida magaalada Adis Ababa.
Previous articleDoorashada Golaha Shacabka oo maanta ka bilaabaneysa Galmudug iyo xubno lasii og yahay…
Next articleGabadhii u doonnanayd Jamal Khashuqji oo Fariin Codsi ah u dirtay Fanaan Dunida Caan ka ah
Xog cusub: Khatarta Wasiirka amniga DF u horseeday xiriirka Somalia & Turkiga
RW Rooble oo caawa kulan xasaasi la qaatay Madaxda dowlad Goboleedyada
Ciidamada Itoobiya oo magaalooyin kale dib uga saaray kooxda TPLF